Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Amasiko » Umculo weRumba waseCongo Ungena ohlwini lwamagugu e-UNESCO
Umculo weRumba waseCongo ohamba phambili e-Afrika manje ususohlwini lwamagugu omhlaba esintu ngemuva kokuba i-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ivume ukuthi lo mculo waziwe emhlabeni wonke.
Inhlangano yeZizwe Ezihlangene yamasiko, ezemfundo, kanye nesayensi i-UNESCO yengeze umdanso we-rumba waseCongo ohlwini lwayo lwamagugu angaphatheki.
Ukuma komculo ohamba phambili e-Afrika, iRumba yaseCongo inothile ngamasiko ase-Afrika, amagugu, nobuntu; konke kukhuluma nge-Afrika.
Emhlanganweni walo wakamuva wokucwaninga ngezicelo ezingamashumi ayisithupha, iKomidi le-UNESCO ligcine limemezele ukuthi i-rumba yaseCongo yamukelwa ohlwini lwayo lwamagugu angaphatheki nobuntu ngemuva kwesicelo seDemocratic Republic of Congo (DRC) kanye neCongo Brazzaville.
Umculo we-Rumba ususelwa embusweni wakudala waseKongo, lapho omunye enza khona umdanso obizwa ngokuthi iNkumba. Yase izuze isikhundla sayo njengefa ngenxa yomsindo wayo oyingqayizivele oxuba isigubhu sama-Afrika agqilaziwe ngezingoma zamakoloni aseSpain.
Umculo umele ingxenye yobunikazi babantu baseCongo kanye ne-diaspora yabo.
Ngesikhathi sokuhweba ngezigqila, abantu base-Afrika baletha isiko nomculo wabo e-United States of America naseMelika. Benza izinsimbi zabo, ezingajwayelekile ekuqaleni, zaba yinkimbinkimbi kamuva, ukuze bazale i-jazz neRumba.
I-Rumba enguqulweni yayo yesimanje ineminyaka eyikhulu ubudala ngokusekelwe kuma-polyrhythms, izigubhu, nezinsimbi zomculo, isiginci namabhesi, konke kuhlanganisa amasiko, i-nostalgia, nokuzijabulisa kokwabelana.
Umculo weRumba uphawuleka ngomlando wezepolitiki wabantu baseCongo ngaphambi nangemva kwenkululeko, wabe usuduma kulo lonke elase-Afrika eningizimu yeSahara.
Ngale kweDemocratic Republic of Congo kanye neCongo Brazzaville, iRumba isendaweni evelele ezwenikazi lonke lase-Afrika ngamagugu ezenhlalo, ezepolitiki, namasiko andulela ukuzimela kwezizwe zase-Afrika.
I-Democratic Republic of Congo kanye ne-Congo Republic bathumele isicelo esihlanganyelwe sokuthi i-rumba ithole isikhundla sefa ngomsindo wayo oyingqayizivele ohlanganisa ukushaywa kwama-Afrika agqilaziwe ngezingoma zamakoloni aseSpain.
I-UNESCO yengeze umculo weRumba waseCongo ohlwini lwayo lwamagugu omhlaba. IDemocratic Republic of Congo kanye neCongo Republic bafake isicelo ngokubambisana sokuthi iRumba yabo ithole isikhundla seGugu Lomhlaba, nokuyinto eyajabulisa abantu baseDemocratic Republic of Congo naseCongo-Brazzaville.
"I-rumba isetshenziselwa ukugubha nokuzila, ezindaweni eziyimfihlo, zomphakathi nezenkolo," kusho i-UNESCO citation. Ukuyichaza njengengxenye ebalulekile nemele ubunikazi babantu baseCongo kanye ne-diaspora yabo.
Ihhovisi likaMengameli waseDemocratic Republic of Congo uFelix Tshisekedi lithe ku-Twitter "UMengameli weRiphabhulikhi wamukele ngenjabulo nangokuziqhenya ukufakwa kweRumba yaseCongo ohlwini lwamagugu amasiko."
Abantu bakuzo zombili i-DRC kanye neCongo-Brazzaville bathi umdanso weRumba usaphila futhi bathemba ukuthi ukungezwa kwawo ohlwini lwe-UNESCO kuzowunikeza udumo olukhulu ngisho nakubantu baseCongo nase-Afrika.
Umculo weRumba uphawuleke ngomlando wezepolitiki waseCongo ngaphambi nangemuva kwenkululeko futhi manje usukhona kuzo zonke izici zempilo yezwe, u-Andre Yoka Lye, umqondisi esikhungweni sezobuciko sikazwelonke sase-DRC enhlokodolobha iKinshasa.
Lo mculo udonsela ekucabangeni, ukushintshana ngamasiko, ukumelana, ukuqina, kanye nokwabelana ngobumnandi ngemithetho yawo yokugqoka egqamile, esho.
Africa IKomidi Kinshasa Umculo UNESCO I-united states